Masoivoho amerikana: nosamborin'ny miaramila "Palestine" an'ohatra ny filoha Trump
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Palestine » Masoivohon'i Etazonia: nosamborin'ny miaramila "Palestine" an'ohatra ny filoha Trump
Masoivohon'i Etazonia: nosamborin'ny miaramila "Palestine" an'ohatra ny filoha Trump
Enga anie 14, 2018
Androany no andro nanokafan'ny Masoivohon'i Etazonia tao Jerosalema, Israel. Androany angamba no andro namonoana ny fizahan-tany tany Jerosalema. Indostrian'ny fandriam-pahalemana ny fizahantany fa tsy ankehitriny.
Androany no andro nampatsiahivin'i Afrika atsimo sy i Torkia ny masoivohon'izy ireo avy any Israel, i Turkey koa dia mampatsiahy ny maso ivoho avy any Etazonia, mpiara-miasa amin'ny OTAN namany.
Ary androany no andro maty ny Palestiniana 55 ary 2,700 naratra tamin'ny miaramila israeliana. Nivadika herisetra kilaometatra fotsiny ny fisokafan'ny masoivoho amerikana.
Nilaza ny tompon'andraikitra palestiniana, tamin'ny andro nahitana herisetra nahafaty olona indrindra taorian'ny ady tany Gaza 2014, dia re ny fitokonana an'habakabaka, ny basim-borona tany Jerosalema. Nisavoritaka ny toe-javatra fandriam-pahalemana tany amin'ny morontsiraka andrefana sy i Jerosalema.
Nilaza i Israel fa sahabo ho 40,000 ny Palestiniana nandray anjara tamin'ny “korontana mahery setra” tany amin'ny toerana 13 manamorona ny fefy fiarovana an'i Strip Gaza.
Nanipy vato sy fitaovana fandrehitra ny Palestiniana, raha ny tafika israeliana kosa nampiasa baomba mandatsa-dranomaso sy afo velona avy amin'ireo sniper.
Nanameloka ny “vono olona” ny mpitarika ny Fahefana Palestiniana. Niresaka momba ny “fanitsakitsahana ny zon'olombelona mahery vaika” ny ONU.
Ity no hetsi-panoherana "Andro fahatezerana" nantsoina tany amin'ny Banky Andrefana, ho fanampin'ny fihetsiketsehana marobe "March of Return" tao amin'ny Làlan'i Gaza nanjakan'i Hamas.
Pomp, lanonana ary hafanam-po no nitondra ny andro tao Jerosalema, satria notokanana ilay Masoivohon'i Etazonia izay nandrasana fatratra tao amin'ny zavatra neken'ny filoha Donald Trump tamin'ny volana desambra ho renivohitr'i Israel.
Ny tranokalan'ny Masoivoho amerikana vaovao dia nandefa: Ho vavolom-belona amin'ny tantara! Fito-polo taona taorian'ny faneken'ny filoha Truman ny fanjakan'ny Isiraely, dia mirehareha sy faly izahay anio hanokatra ny Masoivoho Amerikanina vaovao any Jerosalema, renivohitry ny fanjakan'ny Israel.
Ny Fahefana Palestiniana miaraka amin'ny pejy Facebook ofisialin'ny Mahmoud Abbas 'Fatah Movement dia namoaka sary nopetahana sary ny filoham-pirenena amerikana Donald Trump "nosamborina" teo amin'ny Tendrombohitra Temple nataon'ny miaramila "Palestine."
Fisamborana an'i Trump nataon'ny filohan'i Etazonia nataon'i Fatah
Palestina tsy navela hiditra tato ho ato ny Firenena mikambana momba ny fizahan-tany eran-tany (UNWTO)
Wynn Resorts dia nanambara ny fanovana fanampiny ho an'ny talen'ny mpitantana
Ny Hotely Colony any Palm Beach dia manendry Tale Jeneraly vaovao